Amagumbi amabini okulala (enobubele besilwanyana) Perušić, Velebit (A-17540-b)
Perušić, Croatia, Croatia
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAdriatic . Hr
UAdriatic . Hr unezimvo eziyi-164 zezinye iindawo.
Indlu ye-17540 kwidolophu yasePerušić, iVelebit - iLika kunye neGorski kotar, iqulethe iiyunithi zokuhlala zohlobo lwe-Apartment (2). Indlu ihlelwe njenge "yeentsapho ezinabantwana". Ezinye iindwendwe ziya kuthi zibekho endlwini ngexesha leholide yakho. Ngexesha leholide yakho, ababuki zindwendwe bakho nabo baya kuba khona endlwini. Umnini-ndlu akanyanzelekanga ukuba amkele abantu abongezelelweyo kunye nezilwanyana zasekhaya ezingachazwanga kwisicelo sobhukisho kwaye kuyimfuneko ukuzixela kwangaphambili.
I-Apartment inokuthatha iindwendwe ezi-5. Iibhedi zibekwe kumagumbi okulala ama-2, kodwa nakwigumbi lokutyela, ngaphakathi kwe-41m2. Ukutya kunokulungiswa kusetyenziswa ibarbecue ekwabelwana ngayo nezinye iindwendwe. Le yunithi yokulala yamkela izilwanyana zasekhaya ngentlawulo eyongezelelweyo. Akukho balcony okanye i-terrace kwindawo yokuhlala egciniweyo.
KUBANDAKANYA KWIXABISO: irhafu yabakhenkethi, ukucocwa kokugqibela, indawo yokupaka, i-intanethi, ibhedi yomntwana, iayini, i-ayina ibhodi, isixhobo sokomisa iinwele.
IINDLELA EZONGEZELELWEYO NGOKUZITHANDELA: isidlo sakusasa (€ 7.00, i-50% isaphulelo kubantwana abaneminyaka eyi-4 ukuya kwi-12 iminyaka, Isimahla kubantwana abangaphantsi kweminyaka emi-4), izilwanyana zasekhaya (€ 5.00 ngobusuku).
Ukufumaneka kweenkonzo ezongezelelweyo ngeentsuku ozikhethileyo zokuhlala, kunye namaxabiso azo (ukuba akukho nanye edwelisiweyo) kufuneka ahlolwe kwangaphambili. Naziphi na iinkonzo ezongezelelweyo ezingaboniswanga kubalwa kwexabiso zihlawulwa ngokuthe ngqo kumnini wepropati kwaye kuphela xa zisetyenziswe ngumvakashi.
I-Infield (Igcinwe Kakuhle), Intendelezo (300m2, Indawo elungele abantwana, Indawo yokuHlala), Indawo yokuPaka (Inani leendawo zokupaka: 4, Umgama ukusuka kwindlu: Kwintendelezo), Indawo yokutyela: ekwabelwana ngayo, Isidlo sakusasa, iWiFi Internet, I-Hairdryer , Intsimbi, ibhodi yoku-Ayina, Ibhedi yomntwana
Lo mhlaba umi ngakwindlela enkulu
Ukufikelela kwimoto: Ewe
Esi sakhiwo asikho kwindawo ezolileyo
Lo mhlaba ungqongwe buhlaza
Iziko: 32 km
Ivenkile: 7 km
Ukhathalelo lwezonyango olungxamisekileyo: 32 km
Ikhemesti: 7.5 km
Iofisi yokutshintsha: 7 km
Umatshini we-ATM / weBhanki: 180 m
Ulwazi lwabakhenkethi: 32 km
Isikhululo segesi: 12 km
Umbuki zindwendwe ngu- Adriatic . Hr
Iilwimi: Čeština, English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Русский, Español